नेपाल भ्रमण वर्षः इलाममा स्वागत छ समाचार . पर्यटनमंगलबार, १५ पुस, २०७६
घुम्न जाऔं अमरगढी अमरगढी नगरपालिकाले बुधबार ‘घुम्न जाऔं अमरगढी’ अभियानको एक भव्य कार्यक्रमकाबीच शुभारम्भ गर्दैछ समाचार . पर्यटनबुधबार, १६ पुस, २०७६
घुम्नै पर्ने जनकपुरधामका २५ पर्यटकीय स्थल नेपालको एकीकरण पछि नेपालको तराई भुभागमा रहेको यो मिथिला क्षेत्रको महत्व पौराणिककाल देखि जुन रुपमा रही आएको थियो अझ त्यो भन्दा बढी रुपमा धार्मिक र पछि थप पर्यटकीय रुपमा समेत आज यो क्षेत्रको महत्वमा बृद्धि भएको छ समाचार . पर्यटनबिहीबार, १७ पुस, २०७६
प्रदेश ५ जाँउ, शान्ति र पुण्य कमाऊँ बुटवलबाट ४४ किलोमिटरको दुरीमा लुम्बिनी छ । लुम्बिनी भगवान गौतमबुद्धको पवित्र जन्मस्थल हो । इसापूर्व ६२३ मा पवित्र बगौचामा मायादेवीका काखबाट बौद्ध धर्मका प्रणेता, शान्तिका अग्रदुत भगवान गौतम बुद्धको जन्म भएको हो समाचार . पर्यटनशुक्रबार, १८ पुस, २०७६
यी हुन् गण्डकीका मनमोहक ठाउँ गण्डकी प्रदेशमा घुम्नलायक प्रशस्त ठाउँ छन् । तीमध्ये पोखरा त धेरैको पहिलो रोजाइमै पर्छ समाचार . पर्यटनआइतबार, २० पुस, २०७६
आहा ! भूस्वर्ग खप्तड खप्तडमा लाग्ने विविध सांस्कृतिक मेलाहरू शदियौँदेखि प्रचलित र प्रख्यात छन् । जेठ शुक्लपक्षको गंगा दशहरा तिथिमा यहाँ हरेक वर्ष ठूलो मेला लाग्ने गर्छ । हजारौं तीर्थयात्री र आन्तरिक पर्यटक यहाँ आइपुग्छन् । त्रिवेणी नदीमा स्नान, सुदूर पश्चिमकै प्रसिद्ध हुड्के नाचको मज्जा लिन पर्यटकहरू यहाँ आउने गर्छन् समाचार . पर्यटनसोमबार, २१ पुस, २०७६
देउडा खेल्दै डडेल्धुरा हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको रात (रतेडी) र दोस्रो दिन (दिउसेडी) मेला लाग्ने गर्छ । खनमडा, छचोडा, दुमडा र जिलोडा भ्राण (भण्डार) रहेको उग्रतारा भगवती मन्दिरमा यी चारवटै गाउँबाट रतेडी मेलामा बिहान ‘देउरो’ आएपछि दिउँसेडी मेला सुरु हुन्छ समाचार . पर्यटन१५ घण्टा
घुम्नैपर्ने बैतडी काठमाडौंपछि सबैभन्दा धेरै मन्दिर भएको जिल्लाका रूपमा पनि बैतडी चिनिन्छ । बैतडी अमर सहिद दशरथ चन्दको जन्मथलो पनि हो समाचार . पर्यटनबिहीबार, २४ पुस, २०७६